बलिउड सुपरस्टार आमिर खान र शाहरुख खानबीच किन बोलचाल छैन ?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
बलिउड सुपरस्टार आमिर खान र शाहरुख खानबीच किन बोलचाल छैन ?
काठमाडौं। बलिउडका केही अभिनेताहरु एकअर्कासँग बोल्दैनन् । यी मध्ये चर्चित स्टार अमिर खान र बलिउड किङ साहरुख खानबीच बोलीचाली छैन । विभिन्न कार्यक्रममा उनीहरु एक अर्काबारे बोल्ने गर्छन् तर उनीहरु मिल्ने मित्र भने होइनन् । ‘कफी विथ करन’ कार्यक्रममा आमिर खानले पनि शाहरुखसँग राम्रो सम्बन्ध नभएको स्वीकारेका थिए ।
सन् १९९८ मा आयोजित जि सिने अवार्ड कार्यक्रममा शाहरुख खानले अवार्ड पाएपछि आमिर खानप्रति तिखो आलोचना गरेका थिए । उनले अवार्ड पाएपछि आमिरलाई व्यंग्य गर्दै सलमान खानसँग अवार्ड सेयर गरेका थिए । आमिर खानलाई सबैले बिर्सिने र शाहरुखलाई मात्र सबैले याद राख्ने उनले बताएका थिए । सन् १९९६ पछि कुनै पनि अवार्ड कार्यक्रममा नगएका आमिरलाई यसरी शाहरुखले व्यंग्य गरेका थिए । त्यसपश्चात उनीहरुबीच एकखाले शीतयुद्ध नै चलेको थियो ।